ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဘဝကပိုလွယ် Make | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဘဝကပိုလွယ် Make
ငါ avid ခရီးသွားဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတစ်ကြောင်း တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွား. ထို့နောက်သငျသညျကမ်ဘာကိုမွငျရနှငျ့သငျမည်သူမဆိုအခမဲ့ရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုပါနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာ ခရီးစဉ်စီစဉ် နှင့် preference ကိုသို့မိမိတို့၏အဆငျပွမှေုမြားကိုယူ. ဒါကြောင့်သင်ကတစ်ကိုယ်တော်သင်နှင့်မည်သို့နှင့်အခါသင်သွားချင်မှသွားချင်ကိုမဆိုအရပ်မှသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရခရီးသွားလာကြသောအခါ. ပြင်သစ်ကိုမြင်လျှင် ငါ၏အအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာစာရင်းပြုပါရန်နှင့်အထူးသဖြင့်မီးရထားကနေတဆင့်ဒီခရီးစဉ်စေရန်အပေါ်ခဲ့တာငါခဲ့တာကြောင့်တစ်ခုခုခဲ့လိုက်ပါတယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း လုပ်ရန်. လည်း, လုံခြုံဘက်မှာဖြစ်ပြီးဖြုန်းခရီးစဉ်ရှိသည်မဟုတ်မှ, ကျွန်မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် အကြှနျုပျ၏ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန် အွန်လိုင်းနှင့်ကြိုတင်.
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုငါစာအုပ်အကြှနျုပျ၏နှင့်အတူချွတ် start ခဲ့ပါ အွန်လိုင်းရထားလက်မှတ်တွေ? ငါသည်ငါ့ခရီးစဉ်ကြာချိန်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်များနှင့်လည်း သိ. ရှေ့တော်၌ထိုပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း, ငါမြင်ချင်ခဲ့သောအရပ်တို့ကိုခဲ့ကြသည်ရာ. ပြင်သစ်၏မြေပုံထွက်ချထားခဲ့သည်ကိုဘယ်လို? ဤသည်ငါအသီးအသီးများနှင့်တိုင်းသူတို့အားသောနေရာများထဲကတစ်ခုသွားရောက်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအမိန့်ခဲ့တာဘယ်အရာကိုနားလည်ကူညီပေးခဲ့သည်.
ငါထွက်ချထားခဲ့ကြောင်းနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ပြီးတော့လည်းငါတစ်ဦးချင်းစီအရပျ၌ဖြုန်းဖို့ခဲ့အချိန်ရက်စွဲများကိုပြုပြင်တာတွေများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်တို့သညျ လာ.. စာအုပ်ဆိုင်ကိုငါ့ရထားလက်မှတ်ကိုငါ့ခရီးသွား၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်တိကျတဲ့မှငါ့ကိုလိုအပ်ပါတယ်. ထို့ကြောင့်စုံလင်ခြင်းရှိဖို့လိုအပျစီစဉ်.
စာအုပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိသော်လည်းဝဘ်အားဖြင့်, ငါ၏ရထားလက်မှတ်သင်ရုံဘွတ်ကင်မှစသောအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ထပ်တူညီပေါ်တယ်အသုံးပွုနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ; ငါသောကနောက်ဆုံး option ကိုဖွစျခငျြခဲ့သည်လူတစ်ဦး၏ကြင်နာတွေနဲ့. ထိုအခါစာအုပ်ငါ၏အမီးရထားလက်မှတ်၏ခြေလှမ်းအွန်လိုင်းသို့ရောက်လာသော. အရပျ၌ယခုခရီးသွားအပေါငျးတို့သရက်စွဲများနှင့်ကြိမ်နှင့်အတူ, လိုအွန်လိုင်းတွင်ကျယ်စွာမှတဆင့် booking www.saveatrain.com task ကိုအတော်လေးလွယ်ကူလုပ်. လည်း, ရုံသင်သည်လည်းသင်အွန်လိုင်းစာအုပ်ငါ၏အမီးရထားလက်မှတ်များအတွက်အသုံးပြုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်. သတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခွင့်ခံစားရ. အဓိကအကြောင်းပြချက်အများဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များကုန်ကျစရိတ်ဝှက်ထားကြပြီဖြစ်ခြင်း, အပြောင်းအလဲနဲ့အခကြေးငွေနှင့်ဘွတ်ကင်စွဲချက်နဲ့တူ.
ယနေ့တွင် နည်းပညာ ကျိန်းသေကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအလားတူ လုပ်. လုပ်သော ခရီးသွားလာ အားလုံးသင်သည်လုပ်ရတဲ့မပါဘဲအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်နှင့်သင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖို့လိုအပ်သောခရီးသွားအကြောင်းကိုယုံကြည်မှုဖြစ်ကြောင်းသေချာနေဖြင့်အတော်လေးလွယ်ကူကမ္ဘာလုံးကျော်. ကျွန်မအွန်လိုင်းကိုငါ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်, သင် ... လုပ်ပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုသင်ခရီးသွားလေ့ကျင့်သည့်အခါသင်၏အသက်တာပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းလုပျနိုငျတစ်ခုခုရှိလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေး (သငျသညျယခုတိုငျအောငျဖတျရှုပါလျှင်သင်တစ်ဦးကူပွန်ထိုက်, အဘို့ဤမျှ 5% လျှော့စျေးကူပွန်ကိုသုံးပါ: emailcoupon) – https://www.saveatrain.com
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmake-your-life-easier-with-save-a-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / ru သို့မဟုတ် / pl နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ja ပြောင်းလဲနိုင်သည်.